China Hunhu hwealuminium poda kugadzira uye fekitori | Teng'an
Kune akawanda marudzi emagetsi anogadzira ejenti, ayo anogona kukamurwa muzvikamu zviviri: simbi uye isiri-simbi. Simbi inogadzira gasi inosanganisira mapoda kana mapasta akadai sealuminium (AI), zinc (Zn), magnesium (M2), alloys-zinc alloys uye ferrosilicon alloys. Zvisiri-simbi zvinosanganisira hydrogen peroxide, ngura carbide uye sodium carbonate pamwe nehydrochloric acid. Nekudaro, sezvo gasi rinogadzira maitiro esimbi aluminium iri nyore kudzora, iro gasi rinogadzira vhoriyamu rakakura, uye rine mari, saka parizvino, nyika dzese dzepasi rose dzinoshandisa aluminium poda kana aluminium peti seye inogadzira gasi.
Aluminium poda poda ndeyekunamatira-senge aruminiyamu poda chigadzirwa chine mvura inodzivirira mumiriri. Kufanana nealuminium poda, inogona kushandiswa seyakagadzira gasi inogadzira kongiri ine mhepo. Yayo gasi-inogadzira hunhu curve yakafanana neiyo yealuminium poda. Iyo yakachengeteka uye ine hupfumi mhando nyowani yegasi-inogadzira mumiririri iyo yanga ichishandiswa zvakanyanya. Aluminium poda poda zvakanyanya ine zvinotevera hunhu
(1) Hazvisi nyore kuwana guruva
Sezvo isu tese tichiziva, aluminium mhando yesimbi yakajeka. Kuwanda kwayo kuri 2.7g / cm3. Iyo aluminium inogadzirwa kuita hupfu hwakatsetseka. Zvidimbu zvadzo zvinodedera kana kufema nekufema zvishoma, uye zviri nyore kwazvo kubhururuka uchipararira mumhepo kwenguva yakareba. Kana guruva realuminium poda rosvika 40-30mg pa cubic mita yemhepo, ichaputika kana ikasangana nemoto. Iyo aluminium poda inodziya mualuminium poda poda ichaumba agglomerates kana mafuta pasi pekudzivirirwa nekubatana. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, hapana kana kana mukana mushoma wekubhururuka. Yakachengeteka uye iri nyore pakubata uye kuyera
(2) Hapana static magetsi
Kana iyo poda yakaoma ikaendeswa pneumatic kana kukurumidza kukwizwa nezvimwe simbi, zviri nyore kuburitsa zvimisikidzo zvemitengo. Kana iyo magetsi emagetsi emagetsi ikasvika pane imwe nhanho, inogona kuumba yemagetsi yemoto ndokubatidza iyo poda yealuminium uye inokonzeresa tsaona yekuputika. Aluminium poda haina kuenderana neichi chiitiko.
(3) Kusatya mafungu
Dry aluminium poda ine mukana wekutya mafungu nemvura panguva yekuchengetera nekutakura. Kana diki remvura rikasanganiswa nealuminium poda, nekuda kwemubatanidzwa wemvura uye zvisaririra zvakasiyana zvezvinhu zvinokuvadza mumvura, iyo poda yealuminium inogona kukura kubva pakunonoka kweiyo oxidation kusvika pakuzvipira kwega, kana kutokonzeresa moto. Aluminium poda poda kazhinji ine mvura-yakavakirwa ekudzivirira mumiririri, kana iri mvura-yakavakirwa chigadzirwa, saka haitye hunyoro. Nekudaro, hunyoro hwekunze hunogona kukanganisa iyo yakasimba yezvinyorwa zvealuminium poda uye inofanirwa kudzivirirwa.
(4) Yakanakira bhuku rekuyera
Nekuti poda yealuminium iri nyore kuguruva, zvinonetsa zvakanyanya pakuyera mashandiro. Kurema kwemanyorerwo kwakaoma, uye kuyerwa kwemakaniki kunofanirwa kuve neyakavharwa-guruva-chiratidzo kana mudziyo unobvisa guruva. Zvikasadaro, iyo kugadzirwa inozokanganiswa. Aluminium poda poda haina kana dambudziko rakadai. Nekudaro, kana iyo poda yealuminium yakayerwa nenzira, zviri nani kugadzirira kuturika nehumwe huturu, uye vozviyera nevhoriyamu.
(5) Ine imwe furo yekudzikamisa basa
Mimwe yealuminium powders inoda kuwedzera akasiyana epasi anoshanda zvinhu panguva yekugadzira maitiro. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinogona kutamba chinzvimbo mukudzikamisa furo. Naizvozvo, kana mamiriro ezvinhu achinge abvumidza, iyo yekudzikamisa furo inogona kusiiwa kana kushandiswa zvishoma.
(6) Kuchengetedza kwekugadzira
Chinhu chakakurumbira chealuminium poda ndeye kuchengetedzeka kweichi chigadzirwa. Kana uchikuya aruminiyamu upfu, imwe huwandu hwehupfu hwakaoma uye mvura yekugaya midhiya inowanzo kuwedzerwa kuchigayo panguva imwe chete, uye maitiro ese ekukuya neasina-esimbi kukuya muviri uri mune yakasarudzika uye yakavharwa nyika, uye hapana oxidation uye dambudziko remoto. Naizvozvo, kuchengetedzeka kwenzira yekugadzira kwakakwirira zvakanyanya kupfuura iko kugadzirwa kwealuminium poda.
Pashure: Aqueous aluminium poda poda
Zvadaro: Iyo chiyero chekushandisa kwehydrated aluminium paste
kongiri yealuminium upfu
flaky aruminiyamu upfu
gasi aruminiyamu upfu